Mechie ma malitegharia site na iji iwu | Site na Linux
Ọtụtụ oge anyị chọrọ ịma otu esi agbanyụ kọmpụta ahụ, bidogharịa ya ... nke ọ bụla mgbe oge ụfọdụ gasịrị ma ọ bụ n’oge ọ bụla, nke ọma, nke a bụ otu esi eme nke a site na ọnụ:
1 Imechi PC:
2 Iji gbanyụọ PC mgbe oge akọwapụtara:
3 Iji gbanyụọ PC na oge a kapịrị ọnụ:
4 Malitegharịa ekwentị ahụ na PC nke ọ bụla n'ime ihe ndị a:
5 Iji malitegharịa PC mgbe oge ụfọdụ gasịrị:
6 Iji malitegharịa PC na oge a kapịrị ọnụ:
kzkggaara @ geass: ~ $ sudo nkwụsị -h ugbu a
kzkggaara @ geass: ~ $ sudo nkwụsị -h + "oge achọrọ"
Ihe nlele: mechie sudo -h + 10 // Usoro ahụ ga-emechi minit 10 mgbe ị banyere akara iwu a.
kzkggaara @ geass: ~ $ sudo nkwụsị -h "oge achoro"
Ihe nlele: mechie sudo -i 22:30 // Usoro ahụ ga-akwụsị na 22: 30 pm, nke ahụ bụ; na 10:XNUMX n'abalị.
Malitegharịa ekwentị ahụ na PC nke ọ bụla n'ime ihe ndị a:
kzkggaara @ geass: ~ $ sudo nkwụsị -r ugbu a
kzkggaara @ geass: ~ $ sudo nkwụsị -r +"Oge chọrọ"
Ga-agbanwe ""Oge chọrọ" ”Maka ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ ego nke oge ichere tupu ịmalitegharị usoro ahụ.
Ihe nlele: mechie sudo -r + 10 // Usoro ahụ ga-agbanyeghachi 10 nkeji mgbe ị banyere ntinye iwu a.
kzkggaara @ geass: ~ $ sudo nkwụsị -r "Oge chọrọ"
Ihe nlele: mechie sudo -agba 22:30 // Usoro ahụ ga-amaliteghachi na 22: 30 pm, nke ahụ bụ; na 10:XNUMX n'abalị.
Iwu ndị ọzọ na: Mụta ime n'enweghị ihe osise
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Mechie ma malitegharia site na iji iwu
Naanị m na-eji ya mgbe m kwesịrị ịmalitegharị igwe ahụ ma enweghị m ike ịme ya site na eserese
Ọ bụla echiche iji gosipụta ozi ọ bụla oge niile?
Kọwaa nke ọma ihe ị chọrọ ime na enyere m aka imezu ya 🙂
Ka anyi kwuo:
shutdown -h 10 «imechi pc na» # oge
echiche nke na ọ na-egosipụta ozi n'ime otu ọnụ ahụ kwa oge iji dọọ aka na ntị.
Ah, dị mfe.
Anyị buru ụzọ tinye ya ka ọ chere 60 sekọnd, mgbe sekọnd 60 ahụ gafere, gosipụta ozi na ọdụ nke na-ekwu "imechi" na mgbe 10 gachara sekọnd ọzọ, bido usoro mmechi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igosi ozi mana ọ bụ ọkwa usoro (Gnome ma ọ bụ KDE) ọ ga-abụ na iwu iziga-eziga, maka nke a iji rụọ ọrụ ị ga-enwerịrị ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ, akara ahụ ga-abụ:
Daalụ daalụ, ọ bụ ihe m na-achọ kemgbe.
Ndewo, echere m na ozi m ga-enye gị ga-enyere gị aka.Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ, ị nwere ike ịbịakwute m;
ị nwere ike iji faịlụ ahụ (dị na / etc /) / nye iwu "crontab" iji mepụta "ọrụ ndokwa" site na itinye ụkpụrụ: ụbọchị nke ọnwa, ụbọchị n'izu, onye na-eme ya ...
Ọ bara ezigbo uru maka sava ndị chọrọ ụfọdụ nnwere onwe ... Enwere m olileanya na ọ na-enyere aka 🙂
Zaghachi Francisco Martínez
Ezigbo mma, mana ha bụkwa:
init 0 (gbanyụọ pc)
init 6 (Malitegharịa ekwentị pc)
Ha dị mfe hehee,
Obere igbu onwe m echekwara, n'ihi na ịga na runlevel 0 na-agaghị agafe ndị ọzọ, bụ nhazigharị iwepu ike USB, nri?
init 0 ihe ọ na-eme bụ nri ahụ? 🙂
Hahaha ee, echere m na mgbe m na-eme ngwa ngwa bu mgbe m mere ya xD
You'll ga-ahụ mgbe ị Ibu Ibu gị na kọmputa heh heh.
Ọfọn ma ọ bụrụ na ọ bụghị, carcamal ahụ na-enye gị otu n'ihi na ọ hụrụ gị n'anya.
Hahaha, kedu ka ihe si jọọ gị ^^
Ehe, Agaghị m eme ya ọzọ. Lee nkwa!
Mana asi na m bu ezigbo nwanyi xD
Mba, ọ bụghị igbu onwe ya. Nzọụkwụ 0 na 6 na-akwụsị ọrụ niile, kpughee draịva ndị ahụ tupu ha agbanyụ, yabụ na ha abụghị ịmịpu eriri ahụ.
Echere m na ndị na-agba ọsọ na etiti mere nke a, na nke ikpeazụ nke e gburu bụ nke mechiri njikọ ahụ ... bia, ọ gbanyụrụ akụrụngwa ahụ. Site na ihe m chere, na naanị ịga usoro ihe ngosi a, sistemụ ahụ ga-agbanyụ n'enweghị ihe ọ bụla, ị nwere ike itinye njikọ iji gụọ maka ya? 🙂
Amaghị m ma ọ jikọtara ya, mana a na m akpọ gị oku ka ị hụ ọdịnaya nke ndekọ ndekọ /etc/rc0.d na /etc/rc6.d (ọ bụrụ na iji Debian), ma jiri ha tunyere ọkwa ndị ọzọ.
Enwere njikọ dị ike nke ọrụ nke na-amalite ma kwụsị mgbe ị na-agbanwe site na otu runlevel gaa na nke ọzọ. Njikọ ndị malitere na mkpụrụedemede "S" na-amalite mmụọ ọjọọ, ndị na-amalite na "K" na-akwụsị ha. Dịka ị pụrụ ịhụ, na ọkwa 0 na 6, njikọ niile na daemons na-amalite site na K, nke pụtara na site na ịgbanye na ọkwa ndị ahụ, ha kwụsịrị daemon niile, wepu faịlụ faịlụ ahụ, mgbe ahụ ihe dị iche n'etiti 0 na 6 bụ na mmadụ na-eziga reboot mgbaàmà na nke ọzọ na akara ntụ ntụ.
N'ezie "nwoke init" ma ọ bụ ihe yiri ya ga-enye gị ozi ndị ọzọ. Site na pc a m na-ede, enweghị m ike igosi gị ma ọ bụ gwa gị nke ọma na ngalaba ọ na-ekwu n'ihi na m na-eji sistemụ, nke na-anọchi ihe ndenye niile dị na ntuziaka SystemV, dị ka init.
Ana m eme ya otu a ...
(Amụtara m ya ọtụtụ afọ gara aga site na sistemụ Sun Microsystems
nbanye mbụ dị ka "mgbọrọgwụ", mgbe ahụ m pịnye:
"Mmekọrịta", mgbe ahụ, m pịa "tinye"
mgbe ahụ, m na-ede:
"Init 0" wee pịa "tinye" ma jiri m gbanyụọ igwe
Ka ịmalitegharịa m abanye dị ka "mgbọrọgwụ" na ụdị:
"Reboot" na ebupụtara m pịa "tinye" na nke a ka m malitegharia igwe
Nke a na-arụrụ m ọrụ na usoro Debian, nwee olile anya na ọ ga - enyere gị aka.
Kedu ka esi gbanye laptọọpụ m na keyboard wireless?
Ndụmọdụ: Mee mechie -h ugbu a ya na kwusi (uru: ọ dị mkpụmkpụ, na-enweghị oke ma dị mfe icheta), dị ka akwụkwọ gọọmentị si kwuo (man halt).
Iwu nkwụsị ahụ anaghị arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na iji SystemD. N’okwu ahụ, ọ na-ebelata PC dum, mana ọ naghị ezipụ akara ACPI ka ọ kwụsị, yabụ ị ga-eji aka gị pịa bọtịnụ ike. Ya mere, iwu akwadoro iji dochie "shutdown -h ugbu a" bụ poweroff.
eVeR ihe ị na-ekwu adịghị otú ahụ, Halt na-arụ ọrụ na sistemụ, naanị ị ga - agbakwunye nhọrọ mmechi:
naanị ihe ndọghachi azụ na Halt bụ na ọ chọrọ mgbọrọgwụ na / ma ọ bụ ikikere sudo
M na-eji Fedora, ekele
Zaghachi onye ọrụ fedora
Daalụ maka ozi ahụ. bara uru !!!
Ekwetara m na amaghị m ịmalitegharị na oge ụfọdụ mana anaghị m aghọta ihe eji ya mee ma ọ dịkarịa ala n'ọnọdụ m, m na-agbanyụ igwe ahụ n'oge ụfọdụ mgbe m kwụsịrị nbudata ihe ma m gbakọọ mgbe ọ gwụchara na mgbe niile na-enye ya 1 ma ọ bụ 2 awa ogologo karịa ya dịruru download.
Ọ dị ezigbo mma, ọ ga-emerịrị ihe 🙂
Ọ bara uru maka anyị ndị na-eji Window Window. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịmepụta ntinye na menu (ọ bụrụ na ị nwere otu) iji mechie ma ọ bụ malitegharịa PC.
Ya mere na sudo anaghị arịọ maka paswọọdụ mgbe emechibidoro ma ọ bụ iwu ndị ọzọ pụrụ iche na-egbu, enwere ike ịmepụta iwu na / wdg / sudoers =)
Ọ bara uru maka mgbe m chọrọ ịgbanyụ kọmputa mgbe oge ụfọdụ gasịrị, maka nbudata ma ọ bụ ihe yiri ya, daalụ maka ịkekọrịta.
Daalụ maka ịza ajụjụ
Otu ajụjụ, kedu ka m ga-esi mee ka pc gbanye n'oge ụfọdụ?
Nweghị ike ime ka ọ gbanye site na 0, mana ị nwere ike ime ka ọ lakpuo ụra. Nke ahụ bụ ihe BIOS bụ, ma ọ bụ na BIOS dakọtara enwere ngwa ọrụ Linux. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, m ga-enye gị njikọ.
na-amaghị nwoke dijo
Nwere ike iji kwụsị ma ọ bụ poweroff mechie ma reboot ka ịmalitegharịa (ha anaghị achọ parameters) na uru na ndị a adịghị mkpa ikikere nchịkwa yana ya mere anyị nwere ike iji ihe atụ tinye; cp bigfile.mkv / media / ngwaọrụ; poweroff
Ma ọ bụghị na ị ga-etinye paswọọdụ na anyị enweghị ike ime ka ọ gbanyụọ mgbe ọrụ ọ gwụla ma anyị mere ya dị ka mgbọrọgwụ.
Anyị nwere ike ịgbakwunye -f oke iji mee ka kọmputa mechie ma ọ bụ bidogharịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, ekele.
Cingmanye mmechi ahụ adịghị mma, ebe ọ bụ na ọ na-eme iwu iji belata ike na-enweghị ịkwụsị ọrụ ma ọ bụ diski diski, ọ bụ ya mere o ji dị oke ọsọ!
kwụsị na poweroff KA chọrọ ikikere nhazi. Iji eserese eserese dị mfe n'ihi na X na-agba ọsọ dị ka mgbọrọgwụ, yabụ na ọ naghị ajụ maka elu
Alvarito 050506 dijo
Ọ bụghị ya, opekata mpe na Raspbian (Debian 9 Jessie), m na-agba ọsọ startx dị ka onye ọrụ nkịtị (pi).
Ekwe 1957 dijo
Ajuju, ọ bụrụ na m ga-agbanyụ n'oge ụfọdụ kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ na 22: 30 elekere kwa ụbọchị n'afọ, kedu ka m ga-esi mee n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ? Daalụ nke ukwuu.
Iji mee nke a, tinye akara mmechi ma ọ bụ iwu na crontab: mmechi -r 22:30 ... Akwadoro m ka ị gụọ nke a ka ị mụta otu esi eji crontab: https://blog.desdelinux.net/chuleta-para-entender-mejor-el-crontab/
Ndewo, m ga-achọ ịma otu esi agbanyụ sistemụ na sekọnd 8, n'ihi na ọ bụrụ na ọ na-enye m, mana na nkeji m chọrọ na sekọnd
Zaghachi ka dennis
Chọpụta, ịkwesịrị ịgba ọsọ dị ka mgbọrọgwụ ma ọ bụ jiri sudo
Ndewo m ga-achọ ịma otu esi agbanyụ sistemụ ahụ na 8 sekọnd n'ihi na m na-eji ụfọdụ ntuziaka mana ọ na-agbanyụ ya na nkeji m chọrọ ịma na sekọnd
diony fernandez dijo
M na-ede edemede site na iji iwu ndị a iji gbanyụọ igwe m n'oge ụfọdụ, ihe niile dị mma ruo mgbe m rịọrọ paswọọdụ abịarute, ajụjụ m bụ otu esi etinye koodu nke m bụ mgbọrọgwụ ma ọ bụ na mgbe m ga-enweta sudo ha tinye isi na-akpaghị aka na igbu ya ???
Daalụ maka azịza gị n'ọdịnihu
Zaghachi dionny fernandez
ị nwere ike ịnweta iwu mmechi nke onye ọrụ na-agba.
nzọụkwụ site na nzọụkwụ
chmodụ + s shutdown
mgbe ahụ ị mepụtara njikọ ihe atụ na / usr / bin
cd / usr / biini
ln -s / sbin / shutdown mmechi
na nke a bụ edemede ga-arụ ọrụ na-enweghị mkpa mgbọrọgwụ
Zaghachi iji juan
Ọ bụrụ na m chọrọ ịhazi kọmputa m ka ọ gbanye n'oge ụfọdụ?
n'agbanyeghị, ekele m na-achọ ozi a ogologo oge, ya bụ, ihe dị ka ọkara otu awa gara aga ... ogologo ... ogologo oge.
You nwekwara ike inyere m aka? Adị m ọhụrụ na Linux ma malite na ubuntu mana ọrụ m chọrọ ka m jiri Autocad, kedu ka m ga esi eji Autocad na ubuntu? Ụdị Autocad maka Mac ọ ga-arụ ọrụ?
Daalụ !!! Achọrọ m ozi gị anyị nọ na kọntaktị site na ebe ọ bụla ị nọ ma ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ a Muuuuuuuuah ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke chefuo ya, heh heh.
Zaghachi Carlos Salas
Ndewo otu ajụjụ. Kedu iwu nke na-enye m ohere izipu ozi na kọmputa niile ejikọtara na Wi-Fi network site na ọnụ ọnụ ??? Daalụ n'ọdịnihu!
Ndewo, ezigbo isiokwu… Ajụjụ bụ: kedu ka m ga-esi gbanyụọ ụbọchị ọ bụla n'otu oge ahụ doro anya na ọnụ… Daalụ n'ọdịnihu.
Ndewo Eduardo! You nwere ike itinye ya na cron ka ọ na-agba ọsọ mgbe ịchọrọ ya.
Zaghachi Juan CP Quintana
Na m laptọọpụ m nwere 2 partitions, na nke mbụ m nwere Windows 10 arụnyere, na nke abụọ m Debian 8.3 Jessie arụnyere. Mgbe m abanyela na Debian wee chọọ iji bọtịnụ mkpọchi ma ọ bụ site na njikwa, gbanyụọ ya, ọ naghị emechi usoro ahụ ọtụtụ oge, ọ naghị emechi sistemụ ahụ, n'ụzọ megidere ya, ọ na-agbapụta ma gosi m iwe. Ihuenyo mbu ka ịhọrọ sistemụ nke m chọrọ ịmalite. Amaghị m ihe kpatara nke a. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ya. Adị m ọhụrụ na Debian. Cheers ..
Enwere ike onye biko nyere m aka. Na m laptọọpụ m nwere 2 partitions, na nke mbụ m nwere Windows 10 arụnyere, na nke abụọ m Debian 8.3 Jessie arụnyere. Mgbe m abanyela na Debian ma achọrọ m ịgbanye ya na bọtịnụ mkpọchi ma ọ bụ site na njikwa, otu oge na mgbe ọ kwụsịrị, ọtụtụ oge sistemụ ahụ anaghị akwụsị, na ntụle, ọ na-amalitegharị ma na-egosi m grub home screen iji họrọ sistemụ na m chọrọ ịmalite. Amaghị m ihe kpatara nke a. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ya. Adị m ọhụrụ na Debian. Cheers ..
Ndewo, achọrọ m enyemaka, ọ bụrụ na achọrọ m ịme menu na mmechi nhọrọ abụọ ma malitegharịa, mana opekata mpe oge mbụ m na-agba edemede ahụ ma ọ bụrụ na m nye ya mmechi, ọ ga-ezitere m ajụjụ ahụ ọzọ, na-amanye ịmalitegharịa usoro ahụ , ma ọ dịkarịa ala oge mbụ, mgbe nke a gbanyechara ọzọ ma gbaa edemede ahụ mana oge a ọ na-eme ihe ọ bụla, ya bụ, ọ bụrụ na m gbanyụọ ya, gbanyụọ ya wee malitegharịa ọzọ, kedu ka m ga-esi nweta ya, na igwe ahụ na-echeta na m na-amanye ịmalitegharịa ma ọ dịkarịa ala otu oge.
Kedu ka ị ga - esi wuo edemede nke na - emechi mmechi nke ọma mgbe ọ tụfuru pings 5 ​​n’usoro, site na mgbe ahụ na mmechi nwere oge nke 5 nkeji, mana n’oge ahụ na - aga, ma ọ bụrụ na ị nwere nzaghachi, kagbuo mmechi na gaa n'ihu ihe niile dị mma, ma ọ bụrụ na ọ gara n'ihu na-enweghị nzaghachi, gbanyụọ n'oge ahụ kachasị.
Ọ bụ n'ihi na enwere m rawụta na-ejighị ya jikọtara na nke dị ugbu a, mgbe ọkụ na-apụ ọ na-agbanyụ ma ọ nwere ebe ahụ ga-efunahụ ping, …… na pc nwere UPS / UPS na achọghị m ka ọ gbanyụọ mgbe batrị ahụ gwụrụ. (yabụ ọ naghị ebudata kpamkpam)
Ndewo ọma, adị m ọhụrụ n'iji Linux ma Windows 10 na Linux miri emi 15.3 na laptọọpụ m ma ọ ga-amasị m ịtọlite ​​ike n'oge ụfọdụ, ekele
Zaghachi M @ rko
Ana m eji Fedora. Naanị ihe na-eme ka ọ kwụsị ma megharịa ka ịmalitegharịa. Onweghi nrigo achọrọ iji mee ha.
Zaghachi Drumsman ~
Ugboko 49 dijo
Kedu otu m ga esi esi dozie nsogbu mmechi, ihe na - eme bụ na mgbe m jiri iwu ọ bụla mechie ma ọ bụ bidogharịa igwe m, ọ dị ka ọ na - agbanyụ ihe niile mana diski ahụ, onye na - arụ ọrụ ahụ na - aga n’ihu na - arụ ọrụ nke mere na enweghị m nhọrọ ọzọ mana ịpị bọtịnụ ike ruo mgbe ọ kwụsịrị na nke ahụ adịghị ka ọ dị mma maka ndị otu m, daalụ n'ọdịnihu.
Anọ m na Debian 9 / Genom na m na-eji HP AMD A9 / Radeon R5 Grafics
Zaghachi abdiel 49